10 Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Mobaylka | Martech Zone
10 Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Mobaylka
Arbacada, Juun 27, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Markaad ka hadlayso suuqgeynta moobiilka, waxaan u maleynayaa in ku dhowaad suuq kasta uu helo sawir ka duwan nooca istiraatiijiyadeed ee aad ka hadlayso. Maanta waxaan dhammeynay tababar dhammaystiran oo moobiil ah oo ay goobjoog ka ahaayeen ilaa 50 shirkadood. Sida Marlinspike La-tashiga nagala shaqeeyay manhajkii tababarka, waxaa cadaatay inay jiraan waxyaabo badan oo suuqgeynta moobiilka ka badan inta qofku u malayn karo.
Waa kuwan 10 Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Moobiilka oo laga fikiro
Voice - si uun, kani had iyo jeer waa laga tagaa :). Hadday si fudud isugu xireyso lambar taleefan oo ku yaal boggaaga, ama horumarinta istiraatiijiyad ballaadhan iyo jawaab-celin dhammaystiran iyada oo loo marayo qalab animation wicitaan sida Twilio, adoo ka dhigaya shirkaddaada mid si fudud u wacaya oo hela macluumaadka rajadaadu u baahan tahay waxay sare u qaadeysaa cabbiraadaha beddelaadda.
SMS - Adeegyada fariimaha gaagaaban, ama farriinta qoraalka, ma noqon karto tiknoolajiyada ugu galmada badan adduunka, laakiin shirkadaha geeya teknoolojiyada qoraalka ayaa sii wadaya inay arkaan koritaanka iyo korsashada. Kaliya maahan wax dhalinyaro ah… inbadan oo naga mid ah ayaa farriin u diraya wax ka badan wixii aan horay u soo dirnay.
Xayeysiisyada Mobilada - kuwani maahan xayeysiiskii banner ee hore. Barmaamijyada xayeysiinta moobiilka ee maanta ayaa riixaya xayeysiiska ku saleysan ku xirnaanta, goobta iyo waqtiga… taasoo ka dhigeysa inay u badan tahay in xayeysiintaada uu arki doono qofka saxda ah, meesha saxda ah iyo waqtiga saxda ah.
Xeerarka QR - oh sidaan kuu jeclahay… laakiin weli way shaqeeyaan. Telefoonada Microsoft ayaa akhriya iyaga oo aan isticmaalin barnaamij ganacsiyo badanna waxay arkaan heerar madax furasho oo aad u weyn - gaar ahaan marka qof laga riixayo inuu daabaco illaa khadka tooska ah. Ha eryin iyaga weli.
Emailka Mobilka - emaylka mobilada sicirka furan dhaafeen heerarka furan ee desktop laakiin emaylkaagu wali waa naqshadda warsidaha ee aad iibsatay 5 sano ka hor oo aadan si fudud ugu akhriyi karin aaladda moobaylka. Maxaad sugeysaa
Webka Mobile - xitaa haddii bartaadu aysan diyaar ahayn, waxaad geyn kartaa mid ka mid ah dhowr qalab oo aad ku samayso site mobile saaxiibtinimo. Midkoodna ma fiicna, laakiin waxay qabtaan shaqada si aad uga fiican wax aan jirin. Hubi sicirkaaga soo kabashada mobilada si aad u aragto taraafikada aad lumineyso.
Ganacsiga Mobilada (mCommerce) - hadey noqoto iibsi fariin qoraal ah, moobil, ama hirgalinta soo socota dhow isgaarsiinta goobta, dadku waxay ku samaynayaan go'aanno iibsiga aaladda moobilkooda. Miyay kaa iibsan karaan taada?
Adeegyada Goobta - hadaad ogtahay halka martidaadu ku sugan tahay, maxaad uga yeeli lahayd inuu kuu sheego? Bogagga shabakadda ku saleysan ama barnaamijyada moobiilku waxay macaamiishaada u fududeyn karaan inay ku helaan oo ay kuu yimaadaan.
Codsiyada Macaamiisha - Si aad ah ugama rajo qabin barnaamijyada moobiilka markii ugu horreysay thought Waxaan u maleeyay in biraawsarka shabakadda moobiilku beddeli doono. Laakiin dadku waxay jecel yihiin barnaamijyadooda, waxayna jecel yihiin baaritaanka, raadinta, iyo wax ka iibsashada noocyada ay ku ganacsanayaan iyaga dhexdooda. Ka faa'iideyso codsi ku kalifaya, adeegyada goobta iyo warbaahinta bulshada dusha sare ee barnaamijkaaga moobiilka waxaadna arki doontaa lambarrada oo fuulaya. Hubso inaad ku dhexjirtid SDK kan aad ugu jeceshahay Analytics madal si aad u hesho aragtida aad u baahan tahay!
Kiniiniga - waa hagaag, anigu ma jecli inay kiniinnada ku dhex tuuraan mobilada midkoodna… laakiin barnaamijyada iyo daalacashada awgeed, waxaan filayaa inay xoogaa ka duwan yihiin. Kordhinta cajiibka ah ee iPad, Kindle, Nook iyo Microsoft Surface ee soo socda, kiniiniyada ayaa noqonaya kuwa shaashadda labaad dadku waxay isticmaalayaan iyagoo daawanaya telefishanka ama musqusha ku aqrinaya (eww). Haddii aadan haysan wax dharbaaxid ah barnaamijka kiniinka (sida macmiilkeena Zmags) oo ka faa'iideysanaya khibrada isticmaale ee gaarka ah ee kiniinku bixin karo, waad lumaysaa.
Shirkadaha badankood uma maleynayaan in wax soo saarkooda ama adeegyadooda ay ku qasbi karaan inay xeelad wareega ku wareejiyaan. Waxaan soo bandhigi doonaa tusaale wanaagsan oo shirkad leh barnaamij mobilo aan caadi aheyn oo warshadeed laga yaabo inaadan ka fikirin… Behr. Behr wuxuu geeyay a ColorSmart dalabka moobiilka taas oo kuu oggolaaneysa inaad horay u aragto isku-darka midabka, u dhigma midab adoo isticmaalaya taleefankaaga kamaradda, waxaad ka heli kartaa dukaanka kuugu dhow ee aad ka iibsan karto… iyo xulasho weyn oo ah talooyinka isku-dhafka midabka.
Tags: adeegyada goobtaapp mobilemarketing mobiletabaha suuq geynta mobiladashabakadda suuqgeynta moobiilkanidaamka fariinta gaagaabanSMSfariin qoraal ahcodkafariinta codka
Talaabooyinka Abuurista Bogga Facebook
Sidee Xiriirrada u wadaan taxanaha Webinar ee Dakhliga